News - Ofụri Esịt Automatic Fiber Laser tube tingcha Machine Ngwọta N'ihi Ọkụ Ọkpọkọ Na Korea
Ofụri Esịt Automatic Fiber Laser tube Cutting Machine Ngwọta Maka Fire Pipeline Na Korea
Ofụri Esịt Automatic Fiber Laser tube tingcha Machine Ngwọta N'ihi Fire pipeline Na Korea
Na osooso nke ndị na-ewu nke smart obodo dị iche iche ebe, omenala ọku nchedo ike izute ọkụ nchedo mkpa nke smart obodo, ma na ọgụgụ isi ọkụ nchebe na n'ụzọ zuru ezu utilizes internet nke ihe technology izute "akpaaka" chọrọ nke ọku igbochi na ịchịkwa pụta. Na-ewu nke smart ọku nchedo natara akwa anya na nkwado si mba ahụ na-localities na ngalaba.
Fire nchekwa ewu bụ ihe onye ọ bụla. Maka owuwu nke smart obodo, ọkụ nchekwa ewu bụ a kacha. Otú iwu onye nwere ọgụgụ isi ọkụ nchekwa usoro-eme ka ọ dabara na mmepe nke smart obodo bụ nsogbu na obodo oru ga-atụle.
Dị ka anyị niile maara, ma ọ bụ smart ọku nchedo ụlọ ọrụ ma ọ bụ omenala na ọkụ nchedo ụlọ ọrụ, ihe ndị kasị mkpa akụrụngwa nke dum ọku nchedo usoro bụ ọkụ nchedo pipeline.
Otu n'ime ndị ahịa anyị bụ ụlọ ọrụ na-eduga na nchekwa ọkụ na usoro ọrụ ONE-STOP maka akụkụ nchebe ọkụ na-emepụta ọkpọkọ na Korea, nke na-emepụta ihe ndị na-emepụta ọkpọkọ, ire ere, ọkụ ọkụ na-emepụta ọkpọkọ, ngwá ọrụ ọkụ. Iji mụbaa mmepụta nke ọkpọkọ sprinkler ọkụ, onye ahịa a ewepụtala ihe abụọ Sets 3000w Golden Vtop zuru oke akpaka fiber laser tube ọnwụ igwe P2060A.
Ahịa chọrọ: Laser marking na ịcha na akpa.
Ihe Ngwọta Anyị: Gbakwunye sistemụ akara na ngwa ngwa akpaka iji mezuo akara na tubes tupu ịcha.
Ebe ọ bụ na ọkụ nchedo pipeline bụ mgbe niile na a static ala, mmetụta dị aṅaa chọrọ stricter, na mmetụta dị aṅaa mkpa iji nagide nsogbu, corrosion-eguzogide ma na elu okpomọkụ na-eguzogide. Ejikarị ọkụ anwụrụ ihe ndị: spheroidal mmiri nkedo ígwè anwụrụ, ọla kọpa ọjà, igwe anaghị agba nchara ọjà, alloy ọjà, slotted, chịngọm ná ntutu wdg
P2060A bụ ọkachamara ngwá maka ịcha ọkpọkọ. Ọ na-ebipụ na otu oge na nwere nnukwu ogo akpaaka, nke ukwuu mma mmepụta arụmọrụ.
Na firefighting ihe, ihe ndị kasị mkpa ọkụ emenyụ owuwu ọkụ sprinkler usoro a ga-ekewet nke tupu ụgha anwụrụ, mgbanwe nkwonkwo, welded tinyekwa oyiyi akwa na sprinkler isi, na organically jikọtara ọnwụ, punching na ịgbado ọkụ ịrụ ya mbụ ọrụ.
P2060A akpaka laser anwụrụ ọnwụ igwe bụ a elu-ọgwụgwụ laser ọnwụ tube pụrụ iche akụrụngwa. Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ, ukwuu akpaghị aka, ukwuu kpọmkwem ọnwụ, na-emegharị ka mkpa nke nnukwu-ọnụ ọgụgụ ulo oru mmepụta na ọtụtụ ndị ọzọ na elu atụmatụ, na-aghọ akpa oke maka akụrụngwa tube nhazi ụlọ ọrụ. The ngwaahịa e serialized izute a dịgasị iche iche nke dị iche iche ọnwụ na ebutu tinye mgbalị na ọnwụ chọrọ maka dị iche iche anwụrụ diameters, si otú na-enye ahaziri ọrụ na ndị ọzọ ọrụ na ọkụ nchedo ubi.
The metal laser anwụrụ cutter nwere ike igosi na ọdụ ụgbọ mmiri ọnwụ na anwụrụ n'elu ọnwụ na metal ọkpọkọ. Ọ nwere ike na-bee gburugburu akpa ígwè akpa, ọla kọpa akpa, aluminum akpa, igwe anaghị agba nchara ulo oru akpa, etc .; gburugburu tube uzo ọnwụ, gburugburu tube slotting, gburugburu tube punching, gburugburu tube ọnwụ ụkpụrụ wdg
Golden Vtop Pipe Laser cutter P2060A Atụmatụ
Golden Laser tube ọnwụ igwe e mepụtara na 2012, na December 2013 mbụ set nke YAG tube ọnwụ igwe e rere. Na 2014, ndị tube ọnwụ ígwè e ba mma / mgbatị akụrụngwa ụlọ ọrụ. Na 2015, ọtụtụ eriri laser tube ọnwụ igwe e mepụtara na n'ọrụ dị iche iche ọrụ. Na ugbu a anyị na-mgbe na rụọ na upgrading na tube ọnwụ igwe arụmọrụ.
P2060A 3000w Machine ụzụ kwa
model nọmba P2060A
Tube / Pipe ụdị gburugburu, square, akụkụ anọ, oval, Ob-ụdị, D-ụdị, Triangle wdg;
Tube / Pipe ụdị n'akuku ígwè, ọwa ígwè, H-ọdịdị ígwè, L-udi ígwè, ígwè gbalaga, etc (maka nhọrọ)
Tube / Pipe ogologo Oke 6m
Tube / Pipe loading ibu Max 25kg / m
ukwu size Max 800mm * 800mm * 6000mm
ukwu ibu Oke 2500kg
Megharịa ọnọdụ ziri ezi + 0.03mm
ọnọdụ ziri ezi + 0.05mm
Eriri laser iyi 3000W
ọnọdụ ọsọ Max 90m / min
Chuck bugharia ọsọ Max 105r / min
Cut osooso 1g
Electric ike ọkọnọ AC380V 60Hz 3P
Total ike oriri 32KW
P2060A Machine Cutting Samples Ngosi
P2060A Machine Na The Korea ahịa si Factory
P2060A Machine n'ihi na ọnwụ Fire Pipeline ngosi Video
Nwebiisinka © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Ikike niile echekwabara